Stefan Löfven: Sweden waxqabad dheeraad ah looga baahan karaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra'iisalwasaare Stefan Löfven oo saxaafadda la hadalya sabtidii kaddib weerarkii aragaxiso ee Paris. Photo: Christine Olsson / TT
Stefan Löfven: Sweden waxqabad dheeraad ah looga baahan karaa
La daabacay måndag 16 november 2015 kl 11.37
Ra’iisalwasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa ka dhawaajiyey suurtogal in tahay Sweden waxqabad dheeraad ah in looga baahdo halkan looga soo horjedo kooxda Daacish.
Isagoo u waramyey barnaamijak Aganda ee ka baxa SVT ayuu sheegay in waqtiga loo kordhin doono 35 askeri ee la taliyaasha ah ee taageera cidamada Kurdiyiinta, ayna howlgalka ku jiri doonaan guud ahaan sannadka 2016ka.
Imminka 35 lataliyaal ciidan oo Iswiidhisha ah ayaa ka qayb-galyaa isbaheysiga ka dhanka ah kooxda Daacish. Mar la weydiiyey Stefan Löfven in Sweden waxqabad intas ka ballaran sameyneyso waxuu ku jawaabay in kaalinta iyo dadaalka Sweden ku baxiso halganka kooxdan looga soo horjeedo uu muhim yahay lana yaraysan karin , balse aan la joojin xilligii Sweden wax ka badeli laheyd kaalinta ay ku leedahay howl-galada looga soo horjeedo Daacish. Dowladda dooneyso in ay waqtiga u kordhiso ciidamada lataliyaasha ah ee kaga sugan Ciraaq, howl-galkoodna sii socon doono illaa iyo sannadka 2016ka.
– Waxaan baxinaa tababaro aan la kaashano sideed waddan, waana mid muhiimad weyn leh. Mar dhow way immaan kartaa dood ah in Sweden si un wax uga bashado kaalinteeda, balse waan ka war dhowreynaa inta faalooyin noocas ah ka soo baxahayaan. Kama saareyno meesha in Sweden looga baahan karo waxqabad dheeraad ah, laakiin waxaan qabaneynaa waxa aadka ugu fiicanahay oo ah gacan in aan ka geysano dhanka siyaasadda, tababaro baxino. Waxqabadkeena waa mid muhim ah in la yareystio, ayuu yeri Stefan Löfven.
Hadda midda muhimka ah waa in aan ad adeyg muujino oo aan difacno demokaraatiyadda, xoriyadda iyo bulshada furan oo aan ka difaacno shar wadayaasha ayuu carrabka ku xajiyey Stefan Löfven
– sidoo kale waa muhiim in aan shegno in iyadoo dhinac halganka hubeysan ka wadno haddana in ay mhum tahay in aan dhisno bulsho sinaan ku dheehan tahay oo dhallinyarada u abuureysa mustaqbal rajo, si aysan ugu biirin kooxahan xagjiriinta ah.
Waan in aan siino waqti aan uga murugoono musaabiadii ka dhacday Faransiiska, ayuu raaciyey.
– Dareenkeyga waxa weeye – sidii baa xaasidnimada iyo axmaqnimada loogu geysan karaan dad aan waxba galabsan. Midda se muhimka ah waxay tahay in aysan weligood naga guuleysan argagaxisada. Mid ay doonayaa waa in ay abuuraan amaan xumo iyo cabsi, si aan ugu dhacinin in aan difaacno bulshodeena demokaraatiyadda ku dhisan balse sida ay doonayaan baddelkeeda waa in aan sameynaa, ayuu yeri Löfven.
Waxuuna raaciyey dhacdadii argagaxiso ee ka dhacday Fransiiska in ay ka dhaci karto meel kasta. Masuuliyadda guud ee nasaaran waa sidaan ugu hortagi laheyn una adkeyn laheyn falkaan argagaxiso oo kale in uu dib u dhaco.